I-Steam VR: kuyini, indlela yokuyifaka nemidlalo eyinhloko | Iforamu yeselula
UDaniel Terrasa | 23/11/2021 09:00 | Imidlalo
Inkundla yokusabalalisa imidlalo yevidiyo yedijithali edumile iSteam yethule inguqulo yayo yento engekho ngokoqobo ngo-2014 ngaphansi kwegama Steam VR. Impumelelo yalolu hlelo ibingenakuphikiswa. Okwamanje, isinika okungaphezulu kokungu-1.200 kwe-VR (i-Virtual Reality) okuhlangene nazo zonke izinhlobo zemidlalo nezifanisi, kanye nemodi ye-Augmented Reality ngokubambisana ne-Microsoft.
Umusi uvele ezimpilweni zethu ngoSepthemba 2003 ngesandla sika I-Valve Corporation. Phakathi kwezinye izinto, inikeze isivikelo ezenzweni zobugebengu, ukufakwa okuzenzakalelayo nokubuyekezwa kwemidlalo, ukonga emafini kanye nezinye izinto eziningi ezigcine ziheha abadlali bamageyimu emhlabeni jikelele.
Ukweqa okungokoqobo okubonakalayo kube yisinyathelo esikhulu esicebise ukuzizwisa kwegeyimu ngendlela encomekayo. Nge-Steam VR asijabuleli imidlalo kuphela, kodwa manje futhi singena kuyo ngokoqobo. Siyaphila bona.
1 Ungayifaka kanjani i-Steam VR
1.1 Izidingo zokufaka ubuncane
2 Imidlalo engcono kakhulu ye-Steam VR
2.1 Ingelosi Enkulu: Isihogo Somlilo
2.4 I-Doom VFR
2.7 Akukho Sky Sky
2.8 I-Star Trek: I-Bridge Crew
2.9 Star Wars: Ama-squadrons
Ungayifaka kanjani i-Steam VR
Ukuze ukwazi ukujabulela i-Steam VR kuyadingeka ukubhaliswa enkonzweni. Kulokhu kuyadingeka dala i-akhawunti (kumahhala) lapho imidlalo yevidiyo ethengwe ngumdlali ixhunywa khona. Ngaphambili, kuzofanela ulande i-Steam VR nge lesi sixhumanisi.
Ngemva kokulanda, nazi izinyathelo okufanele uzilandele:
Okokuqala, kufanele faka i-SteamVR. Isifundo sivuleka ngokuzenzakalelayo lapho siqalisa.
Ngemuva kwalokho sixhuma isigqoko sokuzivikela noma i-visor kumishini futhi senza kusebenze izilawuli ezinyakazayo.
Ukusebenzisa Windows Mixed Reality, sizovula isicelo Dete etafuleni.
Nge-Dete singakwazi ukuqala noma yimuphi umdlalo we-SteamVR kumtapo wezincwadi weSteam. Singakwazi ngisho nokuqala imidlalo ngaphandle kokukhipha isibukeli, siyiseshe futhi siyifake nge-Windows Mixed Reality. Ukuze konke kusebenze ngendlela efanele, kuzodingeka siqinisekise lokhu okulandelayo:
Ukuthi ithimba lethu linenguqulo yakamuva kakhulu Windows 10 noma Windows 11. Ezicacisweni zesistimu sizoba nokuthi i-OS Build ingu-16299.64 noma ngaphezulu.
Ukuthi asikho isibuyekezo esilinde ukulandwa noma ukufakwa. Uma kunjalo, zonke izinqubo kufanele ziqedwe futhi ikhompyutha iqalwe kabusha.
Izidingo zokufaka ubuncane
Ukufaka i-Steam VR kukhompyutha yethu kuzodingeka sibe ne-Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 noma isistimu yokusebenza ephakeme. Idinga futhi iphrosesa ye-Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350, okulingana noma okungcono, 4 GB we-RAM, kanye nezithombe ze-NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 (ezilingana noma ezingcono). Ekugcineni, sizodinga uxhumano lwe-inthanethi ye-broadband.
Okwamanje iSteam VR iyahambisana neValve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, phakathi kokunye.
Imidlalo engcono kakhulu ye-Steam VR
Khohlwa ikhibhodi futhi ujabulele imidlalo engcono kakhulu yento engekho ngokoqobo nge-Steam VR. Izihloko esizethula kuwe kulolu hlu zizosenza siqonde ukuthi kungani kufaneleka ukutshala isibukeli esihle futhi sijabulele okuhlangenwe nakho okumangalisayo.
Ezinye zazo zimane ziyizihloko ezikhona eziguqulelwe endaweni entsha, zilungele labo abenza uhambo lwabo lokuqala lwemidlalo yento engekho ngokoqobo kanye nalabo abafuna ukuzama igeyimu yabo abayithanda kakhulu ngendlela entsha. Eminye, ngakolunye uhlangothi, imidlalo ye-virtual ebabazekayo edalwe ukuthi iphile ku-VR.
Nansi ukukhetha kwethu kwezingu-10 eziphezulu, ezihlelwe ngama-alfabhethi:
Ingelosi Enkulu: Isihogo Somlilo
Ingelosi Enkulu: Isihogo Somlilo, umdlalo otholakala kuSteam VR
Lona omunye wemidlalo engcono kakhulu yento engekho ngokoqobo yalabo abafuna ukuzizwisa okucwiliswe ngokuphelele. Ingelosi Enkulu: Isihogo Somlilo iwumshini wokudubula ohlanganisa umkhankaso wendaba yomdlali oyedwa ezinguqulweni zawo ze-PS4 ne-PC. Lo mkhankaso usifaka endaweni yokulala irobhothi elilingana nebhilidi. Ukusuka lapho sizolawula izingalo ezimbili ze-giant futhi singasebenzisa izinhlobonhlobo ezinkulu zezikhali ukushaya izitha ezimbi ezivelayo.
Inguqulo ye-PC inikeza imodi yamahhala yokuncintisana yabadlali abaningi. Ukulawula irobhothi sekuphelele, ngezinketho ezinjengokukhethwa kwezakhiwo ezahlukene kanye nemaski emishini. Ukuthenga umkhankaso we-DLC kuSteam futhi kuvula izinzuzo ezithile kubadlali abaningi.
Ukuzivocavoca okunempilo ngokomzimba nangokwengqondo. Beat Saber igeyimu esheshayo, yekinetic lapho umdlali kufanele asike amabhulokhi anamakhodi anombala ngesigqi somculo wangemuva. Sisebenzisa izilawuli ezimbili ezinyakazayo, sizoslayida umoya uqonde noma uqonde. Kudinga ikhono eliningi nokugxilisa ingqondo, kuyilapho kusimemela kokuhlangenwe nakho okuphelele kokucwiliswa.
Ngokuzenzakalelayo i-Beat Saber iza nezingoma ezingu-10 ezizosiphelezela kugeyimu. Kodwa-ke, abadlali be-PC bangasebenzisa umhleli wethrekhi ukuze bakhe uhlu lwadlalwayo lwangokwezifiso noma badawunilode olwabanye abasebenzisi.
I-Catan: kusukela kuthebula lemidlalo ukuya kunto engekho ngokoqobo
Umuzwa womdlalo webhodi Abahlali beCatan silethwe emhlabeni wangempela ngendlela ephumelela kakhulu. Idlala ku I-Catan VR sihlala etafuleni nabanye abadlali (kungaba abane emgqeni), sisebenzisa abalawuli bokunyakaza abahlukene ukukhetha nokubeka izingcezu zethu. Ngale ndlela sizokwakha izindawo zokuhlala, sithole izinsiza futhi senze ukuhwebelana.
Okungokoqobo okubonakalayo ukuthuthumela ngokwesaba: Doom VFR
Ukwesaba okuncane. Ngoba iqiniso elibonakalayo "lingokoqobo" kangangokuthi ayikho indlela engcono yokwesaba. I-Doom VFR iwukujwayela kwemodi ye-VR yomdlalo odumile we-Doom, yize yethula indaba ehlukile nomkhankaso, onamandla okulwa amasha nanemibala.
Omunye wemidlalo engcono kakhulu yento engekho ngokoqobo etholakala kuSteam: Half-Life Alyx.
Kubalandeli bomdlalo, ukubuya okukhazimulayo emhlabeni we-Half-Life, kodwa ngezinketho eziningi ezengeziwe. Kulokhu, singena ezicathulweni zika-Alyx Vance esikhundleni sikaGordon Freeman, sibambene ngezandla eDolobheni 17. Ukudubulana okuphithizelayo, izitha ezingabantu nezingaziwa, izimo ezintsha kanye nezindida eziyinkimbinkimbi okufanele zixazululwe.
Half-Life: Alyx ngesinye sezibonelo ezinhle kakhulu zokuthi kusho ukuthini okwangempela kumdlalo wesenzo: ukuphindaphinda umuzwa ocacile kanye nesasasa lokuhlangenwe nakho.
I-Iron Man empeleni
Ngokungangabazeki omunye wemidlalo engcono kakhulu ye-virtual reality ukuze usiqinisekise ukuthi sisemhlabeni wama-Avengers. Ngenxa ye-Steam VR singakwazi ukulawula isudi ye Iron Man, hlola izimo ezihlukene, ulwe nezitha futhi uqaphele ukuthi izinga le-adrenaline likhuphuka kanjani emithanjeni yethu.
Ngaphansi kokusebenza sizoba nethuba lokwenza imvunulo yethu ngendlela oyifisayo futhi sithole ujusi owengeziwe kokuhlangenwe nakho kwethu njengoTony Stark.
Kodwa uma ufuna okuthile okuhlukile, umdlalo unemodi yomkhankaso ephikisana no-Stark kanye nenkampani ngokumelene ne-supervillain hacker Ghost, i-adventure lapho abanye abalingiswa, abahle nababi, bazophinde bavele.
Akukho Sky Sky
Ukuhlola imihlaba emisha nge-No Man's Sky VR
Igeyimu yokuhlola indawo edumile ingajatshulelwa futhi ngehedisethi yento engekho ngokoqobo. Akukho Sky Sky kusiyisa enhliziyweni yemihlaba emisha kanye nasekujatshulisweni kokucabanga ngobubanzi besikhala esisuka endaweni yabasebenza kuyo umkhumbi wethu. Njengoba umthala uyindawo enkulu kakhulu, akulokothi kusweleke izinto ezintsha ongazibona.
Inguqulo ye-VR yalo mdlalo ihlanganisa izibuyekezo eziningi: imodi yabadlali abaningi, izinketho ezintsha zokuphatha imikhumbi kanye ne-flagship, izisekelo zokwakha ... I-adventure ethakazelisayo yokuphila nezinzwa ezinhlanu.
I-Star Trek: I-Bridge Crew
Siyakwamukela ku-Star Trek: Crew Bridge
Uma ufuna ukufeza iphupho lakho lokujoyina i-Starfleet, leli yithuba lakho: I-Star Trek: I-Bridge Crew. Ungakhetha phakathi kwabalingiswa abane abahlukene: ukaputeni olandelela izinjongo futhi anikeze imiyalo, isikhulu esihlakaniphile (esiphethe izinzwa nezikhali ezisemkhunjini), umshayeli wezindiza oqondisa inkambo nesivinini somkhumbi kanye nonjiniyela iphatha ukuphathwa kwamandla kanye nanoma yikuphi ukulungisa.
I-Bridge Crew idinga kithi ukuxhumana njalo nabanye abasebenzi njengoba sihlola indawo futhi sivikela ekuhlaselweni kwezitha. Indlela ekahle yokujabulela lesi senzo yabadlali abaningi abaku-inthanethi.
Star Wars: Ama-squadrons
I-Star Wars universe ku-Steam VR
Kubalandeli besaga. Lena indlela engcono kakhulu yokuzwa ukulwa emkhathini kusethwe emugqeni wesikhathi we-trilogy yokuqala ye-Star Wars. Umdlali angakhetha ohlwini olude lwemikhumbi-mkhathi eyisakhiwo sodumo, esingakwazi futhi ukuyenza ngendlela esiyithandayo.
I-aesthetics kanye nengqikithi ye Star Wars: Ama-squadrons Ziyiqiniso kusiko lwakudala lwe-Star Wars. Futhi sinemodi yomkhankaso womdlali oyedwa (ungakhetha uhlangothi lwakho: i-Empire noma amaRebels). Kukhona nemodi yabadlali abaningi eku-inthanethi, elungele isikhathi esihle sokuzijabulisa.
Injabulo engapheli idlala i-Stride in VR version
Mhlawumbe umdlalo ongokomzimba kakhulu kulolu hlu. igxathu Kuyinto a ukugijima ngokukhululeka elingena ngokuphelele kumodi yento engekho ngokoqobo. Kuzodinga ukunaka kwethu ngokugcwele, ngokugxuma okuqhubekayo nokuslayida. Izindlela zayo ezingapheli ziyinselele eqhubekayo engasiniki ngisho nokuncane ukuphumula.
Ngaphezu kwalokho, kuwumdlalo onamandla amaningi. Izindlela ezintsha nezandiso zisemisebenzini futhi ziyaphuma njengoba igeyimu izuza ukuduma emhlabeni wonke. Isihloko esingeke sishoke kulabhulali yakho yamathoyizi e-VR.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Imidlalo » I-Steam VR: kuyini, ukuyifaka kanjani nemidlalo eyinhloko